I-China i-US esemgangathweni yoRhwebo nge-LED yoPhumo yokuKhanya kweziKhanyiso kunye neFektri | Saselux
Umgangatho oPhezulu woRhwebo nge-LED ophuma ngaphandle kwezibane
Ukusetyenziswa kwamandla: 4W max.
Iziphumo: 1W ubuninzi.
1.2V Nickel Cadmium Ibhetri
Lobukhulu: 295 * 207.8 * 116mm
UL [UL Certified] Iiyunithi ezikhanyisiweyo eziphuma kwizibane zezibane zavavanywa ngokweemfuno ze-UL924 kunye ne-CAN / CSA-C22.2 No.141, retardant yoMlilo, inaliti ebunjiweyo yezindlu ze-thermoplastic, iMigangatho yeZibane eziNgxamisekileyo, Amandla nezixhobo zeyunithi.
② [Ufakelo olulula] Ubodwa okanye ubuCala obunamacala amabini, Ukunyuswa kwendalo iphela: Ukuxhonywa ecaleni, ukufakwa kophahla kunye nokufakwa kodonga ngokubandakanya i-canopy ekhokele kwizibane zokuphuma ngokungxamisekileyo. Ukukhanya kophawu lwengxakeko kufanelekile ukuba kufumaneke indawo emanzi engaphakathi, kodwa kungabi kwimeko emanzi neyomileyo. Iqondo lobushushu elisebenzayo ngo-0-40 degrees Celsius.
③ [Ukuhlala ixesha elide] Ukukhanya okukhanyayo okuluhlaza okukhanyayo kuxhase umqondiso wokuphuma ngaphezulu kweeyure ezingama-50 000 zobomi kwaye ubonakala ukusuka kwi-100 yeenyawo kude. Ukukhanya kwe-SMD ye-LED ehlala ixesha elide kunye novavanyo lokutshintsha kunye nesikhombisi sokutshaja.
④ [Ukunikezelwa kwaMandla aMandla] I-Nickel cadmium backup battery ibonelela ngaphezulu kwe-90mins ngexesha lokucima kombane. Ixesha layo lokutshaja ziiyure ezingama-24. Ibhetri enokutshintsha enokusetyenziswa ekukhanyeni okungxamisekileyo kokuphuma kwempawu inokutshaja kwakhona i-AC 120 / 277V ngaphezulu kwamaxesha angama-300.
Quality [Umgangatho oQinisekisiweyo kunye neNkonzo] Le mveliso yenziwe ngezindlu ze-ABS ezakhiwe ngenaliti. Ke iyamelana nomlilo. Zonke iinxalenye zomqondiso wophumo olungxamisekileyo ziya kutshekishwa ngaphambi kokuba zithunyelwe kuwe. Sibonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu ngamaxabiso afikelelekayo aqinisekiswe yiminyaka emi-5 iwaranti kunye nenkxaso emva kokuthengisa. Sinikezela ngenkonzo ye-OEM kuwe. Singazilungiselela iipakeji kunye nelogo. Kukho intlawulo eyongezelelweyo yoku. Kodwa ukuba ubungakanani beodolo yakho bukhulu ngokwaneleyo, oku kusimahla.
Egqithileyo Ukukhanya kwe-LED yoKhanya ngokuKhanya kwe-UL / CUL
Okulandelayo: I-LED engxamisekileyo yokuPhuma kwezibane zeCombo